အစောပိုင်းဘဝဖိစီးမှုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အနိုင်ကျင့်သော၊ သို့သော်စိတ်မပါ ၀ င်စားသောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
အစောပိုင်းဘဝကစိတ်ဖိစီးမှုမိန်းမတွေကအတွက် Impulse, အပြုအမူ (2015) compulsive-ကဲ့သို့ပင်တွေတင်, ဒါပေမယ့်မ
ပြုမူနေ neuroscience ။ 2015 ဇွန်; 129 (3): 300-308 ။
Doi: 10.1037 / bne0000059
ရေဗက္ကာဃ Burwell, Editor ကို
Nicholas အမ် Brydges, 1,2,* Megan C. Holmes,1 Anjanette P. Harris က,1 Rudolf N. Cardinal,3,4,5 နှင့် ဂျယ်ရမီခန်းမ6,7
1နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံ, Edinburgh တက္ကသိုလ်အဘို့အရေးစင်တာ
2neuroscience နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသုတေသနအင်စတီကျု, ဆေးပညာကာဒစ်ဖ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း
3အမူအကျင့်များနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံအင်စတီကျု, စိတ်ရောဂါကုသမှု, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှဦးစီးဌာန
5Peterborough NHS ဖောင်ဒေးရှင်းကကိုးစားကိန်းဘရစ်ချ်ဇီဝဆေးပညာကျောင်းပရဝုဏ်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
6နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံ, Edinburgh တက္ကသိုလ်အဘို့အရေးစင်တာ
7neuroscience နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသုတေသနအင်စတီကျု, ဆေးပညာကာဒစ်ဖ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌စိတ်ရောဂါမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်နေကြသည်။ အထူးသဖြင့်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လျစ်လျူရှုထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်စွဲလမ်းမမှန်များအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်။ Impulse နှင့် compulsive ကဤပုံမမှန်၏သော့ချက် features တွေဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခ compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများမြှင့်တင်ရေးကတဆင့်စွဲလမ်းမမှန်များအတွက်အားနည်းချက်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကြွက်အကျဉ်း, variable ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ် prepubertal စိတ်ဖိစီးမှု protocol ကို (Postnatal နေ့ရက်များ 25-27) ထိတွေ့နှင့်တာဝန်လူကြီးအတွက်ထိန်းချုပ်မှုတိရစ္ဆာန်များ၏ကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါသည်ဝတဲ့နှောင့်နှေးမှာသူတို့ရဲ့အပြုအမူခဲ့ကြသည်။ Prepubertal စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးသမီးအတွက် compulsive-type အမျိုးအစားအပြုအမူကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးအမျိုးသမီး2ခရိုနီများအကြားရွေးချယ်ရာတွင်အစားတုံ့ပြန် nosepoke နှင့်အတူ perseverating, task ကိုတစ်ဦးရွေးချယ်မှုအဆင့်ကာလအတွင်းမသင့်လျော်တုံ့ပြန်မှုပြသအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ အလေးပေးအမျိုးသမီးလည်းတာဝန်လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းသင်ယူခြင်းချို့ယွင်းပြသခဲ့သည်။ နှောင့်နှေးလျှော့၏နှုန်းထားများလိင်ဖြစ်စေအတွက်မထိခိုက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်သို့သော် prepubertal စိတ်ဖိစီးမှု, ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့သည်။ ကလေးဘဝဒုက္ခအမျိုးသမီးအတွက်ဇွဲတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းမမှန်များ၏တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထောက်အကူပြုပေမည်။ Perseverative အပြုအမူထို့ကြောင့်ကလေးဘဝဒုက္ခထိတွေ့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်စွဲလမ်းမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတားဆီးများအတွက်အလားအလာကုထုံးပစ်မှတ်များကိုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်လိင်ကွဲပြားမှုမီးမောင်းထိုးပြ, ယောက်ျားများတွင်မမြင်သေးသောခဲ့ကြသည်။
keywords: compulsive, Impulse, ဇွဲ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှု, လိင်ကွဲပြားမှု
ဒုက္ခမှ exposure အစောပိုင်းအသက်တာ၌ (နောက်ပိုင်းအသက်တာ၌စိတ်ရောဂါမမှန်တစ်အကွာအဝေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဘေးလ် et al ။ , 2010; အစိမ်းရောင် et al ။ , 2010; Kessler et al ။ , 2010; Patchev, Rodrigues, Sousa, Spengler, & Almeida, 2014) ။ ကြံ့ခိုင်လင့်များ (တစ်ဦးဆိုးရွားသော Intrauterine ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူကြီးအတွက်အများအပြားနာတာရှည်အခြေအနေများအကြားတည်ရှိနေလျက်, "လူကြီးရောဂါဖြင့်သန္ဓေသားဇစ်မြစ်" အယူအဆမျက်မြင်လက်တွေ့ကောင်းစွာထောက်ပံ့သည်Braun, Challis, Newnham, & Sloboda, 2013; Schuurmans & Kurrasch, 2013; Wojcik, Lee, Colman, Hardy, & Hotopf, 2013) ။ သို့သော်နည်းနည်းအသက်တာ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ် prepubertal အဆင့်ကာလအတွင်းတွေ့ကြုံစိတ်ဖိစီးမှုများရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ အဆိုပါ prepubertal ဦးနှောက်နှစ်ဦးစလုံး perinatal နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်မှသိသိသာသာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, ထိုသို့သော hippocampus, amygdala နှင့် prefrontal cortex (PFC) အဖြစ် corticolimbic အဆောက်အဦများ (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းBrenhouse & Andersen, 2011; Gogtay et al ။ , 2004; Pfefferbaum et al ။ , 1994) ။ ကလေးဘဝဒုက္ခ (လူကြီးအတွက်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဘေးလ် et al ။ , 2010; အစိမ်းရောင် et al ။ , 2010; Kessler et al ။ , 2010; Lovallo, 2013; Sinha, 2008; Turecki, Ernst, Jollant, Labonté, & Mechawar, 2012), နှင့်အကျိုးဆက်သည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအဆင့်တိုးဦးနှောက် (စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုမှတိကျတဲ့အားနည်းချက်များသရုပ်ပြရသောကာလအတွင်းတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ကာလအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုEiland & Romeo, 2013; Pechtel & Pizzagalli, 2011).
ကလေးဘဝဒုက္ခ (နောက်ပိုင်းအသက်တာ၌ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်နှင့်အခြားစွဲလမ်းမမှန်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်ပါသည်Andersen က & Teicher, 2009; Lovallo, 2013) ။ Impulse နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအမူအကျင့်စရိုက်များ (ဤရောဂါနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Everitt & Robbins, 2013; Hosking & Winstanley, 2011; Koob & Volkow, 2010; Leeman & Potenza, 2012), ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဟာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဒစ်ခ် et al ။ , 2010) ။ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လျှင်, ထိုကဲ့သို့ကလေးဘဝဒုက္ခအဖြစ်ဆိုးရွားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များ, ထိတွေ့, ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူတိုးမြှင့်မှတဆင့်စွဲလမ်းမမှန်များအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ Impulse စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုစတင်ထဲမှာအခန်းကဏ္ဍမှထင်လျက်ရှိ၏ ဥပမာအားဖြင့်မြင့်မားထကြွလွယ်သောအဖြစ်ခွဲခြားကြွက်များလျော့နည်းထကြွလွယ်သောအဖြစ်တနျးတွေထက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သိသိသာသာပိုမြန်နှုန်းမှာဆည်းပူးဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် (Dalley, Everitt, & Robbins, 2011; ပယ်ရီ, နယ်လ်ဆင်, & ကာရိုး, 2008) ။ Impulse တစ်ခုမှာအတိုင်းအတာလက်ခံရရှိဖို့နှောင့်နှေးတိုးပွားလာတဲ့ function ကိုအဖြစ်ဆုလာဘ်များရိပ်မိတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့နှောင့်နှေးဝ (ရွေးချယ်မှု Impulse တစ်ပုံစံ), (ဖြစ်ပါတယ်Odum, 2011) ။ ပိုကြီးတဲ့ဒါပေမယ့်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျော်သေးငယ်တဲ့, ချက်ချင်းအကျိုးသည် preference ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှု, ပိုကြီးတဲ့နှောင့်နှေးအကျိုးသည် preference ကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်သော်လည်း Self-controlled ရွေးချယ်မှု (Odum, 2011) ။ သို့သော်ငြားလည်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောယင်းအခြေအနေမသင့်လျော်ထပ်တလဲလဲအရေးယူမှုအဖြစ်သတ်မှတ်, (စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြှင့်တင်ရန်ထင်နေသည်Leeman & Potenza, 2012; Morton & Munakata, 2002). ဇွဲ ( "တုန့်ပြန်မသင့်လျော်သို့မဟုတ် unrewarded ဖြစ်လာသည်ပင်ပြီးနောက်, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှဇွဲကိုတုံ့ပြန်တဲ့သဘောထားကို" compulsive အပြုအမူတစ်ခုပုံစံဖြစ်ပြီး, ယေဘုယျအားဖြင့်အဖြစ်မှတ်နေသည်Ersche et al ။ , 2011, p ။ 754) ။ နှောင့်နှေးလျှော့ဇွဲနှစ်ဦးစလုံး (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားမမှန်အတွက်တိုးလာနေကြတယ်က de Ruiter et al ။ , 2009; Ersche et al ။ , 2011; Volkow & Baler, 2014).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ် prepubertal စိတ်ဖိစီးမှုလူကြီးအတွက် compulsive-type နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းမမှန်များအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်။ လူကြီးအတွက်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့တာဝန်ဝတဲ့နှောင့်နှေးကိုသုံးနှင့်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များတိုးမြှင့်နှောင့်နှေးဝအပြုအမူ (Impulse) နှင့် (compulsive-type အမျိုးအစားအပြုအမူ) တုံ့ပြန် perseverative ၏အဆင့်မြင့်ပြမယ်လို့တွေးဆ။ အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန် (များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိသကဲ့သို့ငါတို့သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုတိရိစ္ဆာန်များကိုစမ်းသပ်Bao & Swaab, 2010; Goel & Bale, 2009).
ကိုးအမျိုးသမီးနှင့် 33 အထီး Lister hood ကိုကြွက် 11 အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားလုံး (ချားလ်စ်မြစ်, Tranent, ဗြိတိန်) မှအိမျတျော၌ရပ်ကြီးခဲ့သည်။ 21 စင်တီမီတာ× 61 စင်တီမီတာ× 43.5 စင်တီမီတာမြင့်သော ((Postnatal နေ့ [PND] 21.5) နို့ပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များအပတ်စဉ်အလေးချိန်နှင့်စံ, လိင်တူ, တူညီတဲ့-အမှိုက်သရိုက်များအိတ်များအတွက်စမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်နှစ်ခုသုံးယောကျအုပျစုမြား၌ကျိန်းဝပ် ) တစ်ဦး 12 အပေါ်, သစ်သားရိတ် (Lillico ဗြိတိန်) နဲ့စီတန်း: အစားအစာ (စံကြွက် Chow, RM12, အထူးန်ဆောင်မှုများအစားအသောက်နှင့်အတူ 1 နာရီ Light-မှောင်မိုက်သံသရာ; Lillico, Surrey, ဗြိတိန်) နှင့်ရေကြော်ငြာ libitum ။ 19 ° C နဲ့ 21 အသီးသီး C နဲ့ 45% နှင့် 60% °အကြားအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ခြောက်လအမှိုက်သရိုက်များကျပန်း (PPS) အုပ်စုတစ်စုအလေးပေးသည့် prepubertally မှတာဝန်ကျ, ကျန်ရှိနေသေးသောငါးအမှိုက်သရိုက်များထိန်းချုပ်မှု (ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုကို) အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်း9အမျိုးသမီးနှင့် 19 အထီး PPS အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်း; 10 အမျိုးသမီးနှင့် 14 အထီး, ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်။ ကြွက် CO တစ်ဦးမြင့်တက်အာရုံစူးစိုက်မှုမှတဆင့်အမြီးန်းကျင်အမြဲတမ်းအမှတ်အသား၏ကွင်းများကဖော်ထုတ်နှင့်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်2 အဆိုပါစမ်းသပ်မှုရဲ့အဆုံးမှာ။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးဗြိတိန်ပြည်ထဲရေးရုံးမှတိရစ္ဆာန်များနှင့်အညီ (သိပ္ပံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ) အက်ဥပဒေ (1986) နှင့်ဒေသခံကျင့်ဝတ်လမ်းညွှန်ချက်များထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
တိရစ္ဆာန်များ (ယခင်ကဖော်ပြထားသည့်အကျဉ်းချုပ်, variable ကို PPS protocol ကိုမှအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်Brydges, Seckl, et al ။ , 2014; Brydges, Wood က, ကေတီဟုမ်း, & ခန်းမ, 2014) ။ အတိုချုပ်, PND 25 အပေါ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ဒီလိုပါပဲရေကူးကန်ထဲမှာ 10-မိရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုကြုံတွေ့ 25 ၏ 34 L ကိုနှငျ့ပွညျ့စုံ (12 စင်တီမီတာမြင့်6စင်တီမီတာအချင်း, 25-L ကိုစွမ်းရည်) 1 ° C မှရေ±။ PND 26 တွင်, တိရိစ္ဆာန်များအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ 15-မိအားလပ်ချိန်များကကွဲကွာ,5မိ၏သုံးအစည်းအဝေးများများအတွက်ပလပ်စတစ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြွန် (30 စင်တီမီတာအရှည်, 30 စင်တီမီတာအချင်း) သို့နေရာချပေးခဲ့သည်။ PND27 တွင်, တိရိစ္ဆာန်များ 6s ခြေလျင်လှုပ်နေတဲ့ကြွက်အော်ပရေတာသေတ္တာ (; Coulbourn တူရိယာ, Lehigh, PA ဆိုပြီး 0.5 စင်တီမီတာ× 0.5 စင်တီမီတာ,3စင်တီမီတာမြင့် 30 ထိတ်လန့်အရက်ဆိုင်) တွင် 30 မိ (တဦးတည်းသီးအ 25 s) ကိုကျော် 32 × 16mA ပေးထားခဲ့ကြသည်။
နှောင့်နှေးဝ Task ကို
တိရိစ္ဆာန်များလူကြီး (PND 60) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်ဖူးပြီးတာနဲ့သူတို့5မိဘို့နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်တစ်ပတ်ကျော်ကတဖြည်းဖြည်းအစားအစာကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များ 85% နှင့်စမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်ဘို့မိမိတို့အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးမှုအလေးချိန်၏ 90% အကြားထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ချက် 0800 နှင့် 1500 နာရီအကြားရာအရပျကို ယူ. , တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များတူညီတဲ့အော်ပရေတာအခန်းတစ်ရက်တစ်တသမတ်တည်းအချိန်တွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်2နာရီနေ့စဉ်စားစရာဘို့အခမဲ့ access ကိုပေးသည်ခဲ့ကြသည်။
လေးတူညီအော်ပရေတာအေးစက်အခန်းများ (ကြွက် modular ခန်း Campden တူရိယာ, Loughborough, Leicestershire, ဗြိတိန်) အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့အတွင်းပိုင်းတစ်ဦး overhead အိမ်သူအိမ်သားအလင်းနှစ်ခုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခရိုနီ (လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ) နှင့် 45 (Campden တူရိယာ, Loughborough, Leicestershire, ဗြိတိန်) ကိုအပ်နိုင် sucrose ဆုလာဘ်လုံးလေးများ MG ရာသို့ခရိုနီများအကြားတစ်ဦးအစားအစာဗန်းရှိ၏။ အစားအစာဗန်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလင်းခဲ့ကာအနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်အစားအစာဗန်း (nosepokes) သို့ဦးခေါင်း entry ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရန်ခွင့်ပြု။ အခန်းအသံက-attenuating သေတ္တာထဲမှာပူးတွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပါးသိုင်းမွေးကိုထိန်းချုပ်စနစ် (Cardinal & Aitken, 2010) သင်တန်းနှင့်အဓိကနှောင့်နှေးဝတာဝန် (တာဝန်အဆင့်) အတွက်စံပြင်ဆင်ထားအချိန်ဇယားကို run ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်အဆင့် (ယခင်အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်Cardinal & Howes, 2005), နှင့်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။
ကြွက်ကနဦးခရိုနီ (လီဗာလေ့ကျင့်ရေး) ကိုနှိပ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦး 30-မိ session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အသီးအသီးစာနယ်ဇင်းတစ်ခုတည်းဆုလာဘ်တောင်၏ချက်ချင်းဖြန့်ဝေမှုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, လက်ဝဲလီဗာကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလီဗာဤအဆင့်စဉ်အတွင်းပြန်ရုပ်သိမ်း, သူတို့သည် 50 လုံးလေးများတစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာစုစုပေါင်းရရှိသောမှီတိုင်အောင်တိရိစ္ဆာန်များနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူဆက်လက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ဤသည်ထို့နောက်ညာဘက်လီဗာဘို့အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသည်။ ကြွက်ထို့နောက်သူတို့တစ်တွေလီဗာ၏တင်ဆက်မှုတစ်ခုစတင်ရန် nosepoke မှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည် nosepoke လေ့ကျင့်ရေး-ကဒီမှာပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးပြန်ရုပ်သိမ်းခရိုနီများနှင့်မှောင်မိုက်၌အခနျးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ တိုင်း 40s, အ houselight နှင့် traylights တစ်စုံစမ်းရာစတင်ညွှန်ပြ, illuminated ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်တစ်ခု nosepoke တုံ့ပြန်မှုလုပ် 10 s ကိုအများဆုံးရှိခဲ့ပါတယ်, သို့မဟုတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးဖျက်သိမ်းနှင့်အခန်းထဲကမှောင်မိုက်ကိုမှပြန်လာသောခဲ့သည်။ ဘာသာရပ် 10 ့အတွင်း nosepoked လျှင် traylight ငွိမျးနှင့်တစ်ခုတည်းလီဗာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကြွက်မဟုတ်ရင်သည့်လီဗာပြန်ရုပ်သိမ်းနှင့်အခန်းထဲကမိုက်ခဲ့ 10 ့လီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်ရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်တုံ့ပြန်လျှင်တောင့်စုဆောင်းခဲ့သည် (သို့မဟုတ် 10 s ကိုကြာဖူးများနှင့်အခနျးထို့နောက်မိုက်ခဲ့ပါတယ်) သည်တိုင်အောင်, တစ်ခုတည်းတောင့်ချက်ချင်းကိုအပ်နှင့် traylight illuminated ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုတွေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ pair တစုံစီလီဗာတစ်ဦးချင်းစီ pair တစုံအတွင်း၌ကျပန်းတင်ဆက်မှု၏အမိန့်နှင့်အတူ, (လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ) ကိုတစ်ကြိမ်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြွက်တစ်နေ့လျှင်ဦးတည်းလေ့ကျင့်ရေး session တစ်ခုအတွက် 60 နာရီအတွက် 1 အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုတွေ (အများဆုံးဖြစ်နိုင်သော, 90 အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုတွေ), တစ်ဦးစံဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူတို့တာဝန်အဆင့်ပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ထို့နောက်ခဲ့ကြသည်။
တိရစ္ဆာန်များ 12 စမ်းသပ်မှုတွေင်တစ်ဦးချင်းစီနှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူငါးနှောင့်နှေးလုပ်ကွက်ပါဝင်သည်ဟုနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများပေးထားခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးများတည်ငြိမ်အခြေခံအပြုအမူအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်သေချာစေရန်, 19 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆက်ပြောသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့စဉ် session တစ်ခု 100 မိကြာမြင့်ခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီတရားခွင်မသက်ဆိုင်ဘာသာရပ်အားဖြင့်ရွေးချယ်မှု, 100 ့ကြာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုပြန်ရုပ်သိမ်းခရိုနီများနှင့်အလင်းအိမ်ထွက် (intertrial ပြည်နယ်) နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ houselight ၏စတင်ခြင်းတရားခွင်ရဲ့ start အချက်ပြခြင်း, ကြွက်ထို့နောက် 10 ့လီဗာသို့မဟုတ်ခရိုနီများ၏တင်ပြချက်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အစားအသောက်ဗန်းထဲမှာ nosepoke ခဲ့ရသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုစမ်းသပ်မှုတွေ-ရွေးချယ်မှုခဲ့ရသည်စမ်းသပ်မှုတွေ-တစ်ဦးတည်းသာလီဗာ (တစ်ဦးချင်းစီလီဗာဘို့တရုံးတင်စစ်ဆေး) တင်ဆက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကြွက်အစားအစာဗန်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တင်ဆက်မှု (ရွေးချယ်မှုအဆင့်) ၏ 10 ့အတွင်းလီဗာပေါ်မှ nosepoke နှင့်အတူ 10 ့အတွင်းတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်တစ်ခုပျက်ကွက်သွင်းယူခဲ့ပြီးလာမယ့်စမ်းသပ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်သည်အထိ box ဟာ intertrial ပြည်နယ်မှပြန်လာသော အစ။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှောင့်နှေးအတွင်းကျန်ရှိနေသေးသော 10 စမ်းသပ်မှုတွေအခမဲ့-ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ ရှိ. , နှစ်ဦးစလုံးခရိုနီတင်ပြခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းလီဗာ (လီဗာတစ်ဦးကသတ်မှတ်ထား) အပေါ်တုံ့ပြန်အမြဲချက်ချင်း 1 တောင့်များ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်ရလဒ်; အခြားလီဗာ (designated လီဗာ B) မှတစ်ဦးကွဲပြားနှောင့်နှေး (နှောင့်နှေးအဆင့်) ပြီးနောက်4လုံးလေးများများ၏ပို့ဆောင်မှု။ A နှင့် B အဖြစ်လက်ဝဲနှင့်လက်ယာခရိုနီများ၏သတ်မှတ်ရေးအုပ်စုများနှင့်၎င်းတို့စပ်ကြား counterbalanced ခဲ့သည်။ ပိုကြီးတဲ့ (4 လုံးလေးများ-လီဗာခ) ဆုလာဘ်0s ကိုတတိယနှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် 10 ့အတွက်, ဒုတိယနှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် 20 s ကိုပထမဦးဆုံးနှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် 40 s မှတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်ဖို့နှောင့်နှေးလုပ်ကွက်, နှောင့်နှေးတိုးတက်အဖြစ် စတုတ္ထနှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနှင့် 60 ့ပဉ္စမနှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု၌တည်၏။ သေးငယ်တဲ့ (1 တောင့်-လီဗာက) ဆုလာဘ်မှနှောင့်နှေးအစဉ်အမြဲ0့ခဲ့သည်။ သင့်လျော်သောနှောင့်နှေးပြီးနောက်, traylight စတင်ခြင်း box ကိုပု intertrial ပြည်နယ် (intertrial ကြားကာလ) မှပြန်လာသောခဲ့သောပြီးနောက်, အစားအစာဖြန့်ဝေအချက်ပြ။
(; SAS Institute မှ, cari, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား JMP စာရင်းအင်းဆော့ဖျဝဲ) နှင့်ကှဲလှဲ၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းပုံမှန်အဘို့အ check လုပ်ထားဒေတာအားလုံးကို generalized linear မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ ထိုအယူဆနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်အဘယ်မှာရှိအသွင်ပြောင်းအနီးကပ်ဆုံးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်များနှင့်ရလဒ်အတွက်မှတ်ချက်ပြုကြသည်။ အများအပြားကအသွင်ပြောင်းထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှေ့၌တစ်ဦးချင်းစီ nonnormal ဒေတာအတွက်ကြိုးစားခဲ့ခဲ့ကြသည်, နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဒေတာအစုများအတွက်အကောင်းဆုံးအသွင်ပြောင်း (ကှဲလှဲပုံမှန်နှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖို့အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ထုတ်လုပ်သောအသွင်ပြောင်း) ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်ဝိသေသလက္ခဏာ (အမှိုက်သရိုက်များနှင့်အုပ်စုတစ်စုအတွင်းအသိုက်နှင့်အမှိုက်သရိုက်များအုပ်စုတစ်စုအတွင်းအသိုက်နှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များမျိုးစုံအတူတူတိရိစ္ဆာန်အပေါ်တိုင်းတာနှင့်အမှိုက်သရိုက်များနှုန်းမျိုးစုံတိရိစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုအတွက်အကောင့်အားလုံးကိုမော်ဒယ်များသို့ကျပန်းအချက်များအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်Myers, ကောင်းပြီ, & Lorch, 2010) ။ တစ်ဦးချင်းစီမော်ဒယ်အားလုံးကိုအသုံးအနှုန်းများကြားဆက်သွယ်မှုကိုလည်းတပ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ Post ကို hoc Tukey ရဲ့ရိုးရိုးသားသားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်စမ်းသပ်မှုထပ်မံသိသိသာသာရလဒ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်နှင့်အဓိကနှင့်သိသာထင်ရှားသောရလဒ်များစာသားထဲမှာတင်ပြနေကြပါတယ်။ အစားအစာကိုကန့်သတ်ခြင်း၏နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာခြင်းအလားတူကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ပေမယ့်အမှန်တကယ်ယုတ်ကိုယ်အလေးချိန်အမျိုးသမီးအတွက် 15 ယောက်ျားအတွက်% နှင့် 10% ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခံခဲ့ရပါတယ် ထို့ကြောင့်, ရာခိုင်နှုန်းကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်းအားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပေမယ့် (ကျော်နှင့်လိင်အထက်) အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး။ သင်တန်းအဆင့်တာဝန်ဝယ်ယူအကဲဖြတ်ရန်, 50 ရရှိရန်ခေါ်ဆောင်သွားအစည်းအဝေးများ၏နံပါတ်ပေါ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်လိင်များ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် nosepoke လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းတဦးတည်း session တစ်ခုအတွက် 50 မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုတွေဖြည့်စွက်ရန်ထွက်ခွာ 60 ညာဘက်လီဗာပုံနှိပျနှင့်။ တာဝန်အဆင့်စဉ်အတွင်းသင်ယူအကဲဖြတ်ရန်ရန်, ကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ် (လီဗာခ) နှင့်ရွေးချယ်မှုစုစုပေါင်းအရေအတွက်တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက်အပေါ် session တစ်ခု, အုပ်စုတစု, လိင်နှင့်နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ တုံ့ပြန်ထို့ကြောင့်အောက်ပါဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်သာ Sessions 11 ထံမှ 12 မှဒေတာများအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ , ကြိမ်မြောက် 19 အားဖြင့်အုပ်စုများနှင့်လေ့လာခြင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်တည်ငြိမ် (ဆိုလိုသည်မှာ "နေ့" မဟုတ်တော့သိသိသာသာအချက်နှင့်တည်ငြိမ်အခြေခံအပြုအမူအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်) ဖြစ်လာခဲ့ပြီး တာဝန်အဆင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ပါဝင်မှုအကဲဖြတ်ရန်, ကျနော်တို့ (ခရိုနီများ၏တရားခွင်နှင့်တင်ဆက်မှုတစ်ခုစတင်ရန် nosepoke အစားအသောက်ဗန်းသို့) စတင်စမ်းသပ်မှုတွေ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကပေါ်အုပ်စု, လိင်နှင့်နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့မော်ဒယ်များကို set up နဲ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က (တစ်ချိန်ကတင်ဆက်နေတဲ့လီဗာရွေးချယ်ရာတွင်) အားတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ တုန့်ပြန် latency အကဲဖြတ်ရန်, အောင်းနေချိန်အပေါ်အုပ်စု, လိင်နှင့်နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏ဆိုးကျိုးများ, စမ်းသပ်မှုတွေအစပျိုးတခါတင်ဆက်ခရိုနီတုံ့ပြန်နှင့်အကျိုးကိုစုဆောင်းရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ ဇွဲရွေးချယ်မှုအဆင့်စဉ်အတွင်းအစားအစာဗန်းထဲသို့ nosepoking သုံးစွဲအချိန်ပေါ်အုပ်စု, လိင်နှင့်နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမော်ဒယ်များကတဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့အဆင့် (အတွေ့အကြုံရနှောင့်နှေးခြင်းဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲ), ​​(intertrial ကြားကာလအတွေ့အကြုံရဝေ) intertrial ကြားကာလနှင့်ဆုလာဘ်နှောင့်နှေး စုဆောင်းမှုအဆင့်။ စမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်များကိုနောက်ပိုင်းမှာနှောင့်နှေးလုပ်ကွက်များတွင်အချို့သောအုပ်စုများအဘို့အတော်လေးနိမ့်ခဲ့ကြသည်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အတိုင်း pairwise ဆက်စပ်မှုကြီးမားသောဆုလာဘ် (လီဗာ B) စုစုပေါင်းတုံ့ပြန်မှု၏နံပါတ်နှင့်တုံ့ပြန်မှုရာခိုင်နှုန်းအကြားဆက်ဆံရေးအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ 0% -40% ၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းမှာတုံ့ပြန်မှုအရေအတွက်နှင့်ကြီးမားသောအကျိုးသည်ရှိကြ၏သောသူတို့တုံ့ပြန်မှုများ၏အချိုးအစားအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုရှိ၏။ ထို့ကြောင့်, သာ 40% တုံ့ပြန်နှင့်အထက်အောက်ပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်အတူလုပ်ကွက်နှောင့်နှေး: ရွေးချယ်မှု Impulse (နှောင့်နှေးလျှော့) အကဲဖြတ်ရန်ရန်လိင်၏ဆိုးကျိုးများ, နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနှင့်ကြီးမားသောအကျိုးသည်တုံ့ပြန်မှုများ၏အချိုးအစားပေါ်အုပ်စုတစ်စုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တုံ့ပြန် 40% ထက်လျော့နည်းနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေ၏ပါဝင်မှုရလဒ်များ၏အရေးပါမှုကိုပြောင်းလဲပစ်မပြုခဲ့ကြောင်းသတိပြုသင့်ပေသည်။ လူကြီးစမ်းသပ်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးမတိုင်မီတစ်ဦးကနောက်ဆုံးမော်ဒယ်အုပ်စု, လိင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်အသက်အရွယ်များ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။
ကိန်းဂဏန်းများ 1a နှင့် and1b1b လက်ဝဲနှင့်လက်ယာလီဗာလေ့ကျင့်ရေးဆည်းပူးဖို့တိရစ္ဆာန်များအဘို့ကိုယူအစည်းအဝေးများ၏နံပါတ်ပြသပါ။ PPS မဟုတ်သလိုလိင်ကိုမ (Box ကို-ကော့အသွင်ပြောင်းမယ့်ဆုလာဘ်များအတွက်ပထမဦးဆုံး (လက်ဝဲ) လီဗာကိုနှိပ်ဖို့သင်ယူခြင်းထိခိုက်; ထောင့်ကွက် & ကော့, 1964); အုပ်စု, F(1, 5.65) = 0.0001, p = .99; လိင်, F(1, 35.26) = 0.005, p = .95; လိင်× Group မှ, F(1, 35.26) = 2.28, p = .14 ။ သို့သျောလညျးကိုထိန်းချုပ်အမျိုးသမီးဒုတိယ (ညာ) လီဗာ 50 ကြိမ်နှိပ်သင်ယူဖို့ထိန်းချုပ်မှုအထီးထက်နည်းပါးလာအစည်းအဝေးများကို ယူ. , လိင်× log အသွင်ပြောင်း, Group မှ, F(1, 47.15) = 6.51, p = .01, အုပ်စုတစ်စု၏အဘယ်သူမျှမအဓိကသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်ပေမယ့်, F(1, 6.43) = 0.28, p = .61, ဒါမှမဟုတ်လိင်, F(1, 47.15) = 0.45, p = .51 ။
prepubertally ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အစည်းအဝေးများ၏နံပါတ် (Con) နှင့်အလေးပေး (PPS) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက် (က) တစ်ဦးအကျိုးသည်ပထမဦးဆုံး (လက်ဝဲ) လီဗာကိုနှိပ်ဖို့သငျယူ, (ခ) ဆုများအတွက်ဒုတိယ (ညာ) လီဗာကိုနှိပ်ဖို့သငျယူ နှင့် (ဂ) nosepoke လေ့ကျင့်ရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားရောက်ရှိဖို့။ ...
ပုံ 1c PPS အမျိုးသမီးအဆိုပါ nosepoke တာဝန်အတွက်စံနှုန်းရောက်ရှိဖို့ရှည်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးသမီးအပေါင်းတို့နှင့်ယောက်ျားပေါင်းထက်ကိုယူကြောင်းဖော်ပြထားသည်; အုပ်စု, F(1, 25.1) = 4.7, p = .035; လိင်, F(1, 54.9) = 10.28, p = .002; လိင်× Group မှ, F(1, 23.94) = 4.48, p = .04 ။
PPS ယောက်ျားအတွက်ထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားအတွက် PPS အမျိုးသမီးအတွက်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးသမီးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ6အားဖြင့်ကြီးမားသောအကျိုးသည်လီဗာပုံနှိပျ၏နံပါတ် (လီဗာခ) တည်ငြိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည် (ဆိုလိုသည်မှာ session တစ်ခုမဟုတ်တော့သိသိသာသာအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်), ကြိမ်မြောက် 8, ကြိမ်မြောက်4နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ3; arcsine အသွင်ပြောင်း: လိင်× Group မှ×တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ: F(18, 4507) = 2.16, p = .003 ။ ယေဘုယျအားတုံ့ပြန်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများနှင့်လေ့လာခြင်းအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ 11 အားဖြင့် (ဆိုလိုသည်မှာ session တစ်ခုမဟုတ်တော့သိသိသာသာအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်) တည်ငြိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်; arcsine နေ့, အသွင်ပြောင်း, F(18, 4507) = 2.12, p = .004 ။
ပုံ 2a နှောင့်နှေးလုပ်ကွက်တိုးတက်အဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များ (အစားအစာဗန်းထဲသို့ nosepoking တဆင့်) နည်းပါးလာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်ကြောင်းသရုပ်ဖော်; arcsine အသွင်ပြောင်း, နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, F(4, 2012) = 119.23, p <.0001 လျော့နည်းသောအစပျိုးမှုပုံစံများသည်အုပ်စုများနှင့်ကွဲပြားသော်လည်း PPS မှပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အုပ်စု F (1, 7.33) = 1.28, p = .29; လိင်, F(1, 46.91) = 0.003, p = .96; သို့မဟုတ်အုပ်စု, လိင်အပြန်အလှန်× F (1, 38.04) = 0.04, p = .85 ။
စမ်းသပ်မှုတွေ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်သည် (က) အစပျိုးနှင့် (ခ) (Con) ထိန်းချုပ်မှုများကတုန့်ပြန်နှင့် prepubertally (PPS) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်းဒေတာတင်ဆက်ထားပါသည်။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင်တဦးတည်းစံအမှားကိုယ်စားပြုသည်။
ပုံ 2b ထိန်းချုပ်မှုအထီးနှောင့်နှေးလုပ်ကွက် 40 နှင့် 60 စဉ်အတွင်းရှိသမျှသည်အခြားသောအုပ်စုများထက်ပိုပြီးတုန့်ပြန်သော်လည်း PPS အမျိုးသမီး, နှောင့်နှေးလုပ်ကွက် 20 နှင့် 40 စဉ်အတွင်းရှိသမျှသည်အခြားသောအုပ်စုများထက်တင်ပြခရိုနီလျော့နည်းတုံ့ပြန်ကွောငျးဖျောပွသ; arcsine အသွင်ပြောင်း, Group ကနှောင့်နှေး Block ကို×လိင်× F(4, 2012) = 3.66, p = .006 ။ အလေးပေးအမျိုးသမီးနှောင့်နှေးတိုးလာအဖြစ်, လျော့နည်းတုံ့ပြန်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးသမီးနှင့် 40 နှင့် 40 စက္ကန့်နှောင့်နှေးမှာအဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်အတူ 60 စက္ကန့်နှောင့်နှေးသည်အထိလျော့နည်းတုံ့ပြန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအထီးရှိသမျှသည်အခြားသောနှောင့်နှေးခြင်းထက်0နှင့် 10 စက္ကန့်နှောင့်နှေးမှာကိုပိုပြီးတုန့်ပြန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအလေးပေး ရှိသမျှသည်အခြားသောနှောင့်နှေးခြင်းထက် 40 နှင့် 60 ၏နှောင့်နှေးမှာလျော့နည်း; နှောင့်နှေး×လိင်× Group မှ, F(4, 2,012) = 3.66, p = .006 ။
အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များကိုပထမဦးဆုံး (60) နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နောက်ဆုံး (0) တွင်ပိုမိုနှေးကွေးစွာစမ်းသပ်မှုတွေ (အစားအစာဗန်းထဲသို့ nosepoking အားဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်) အစပျိုး; အသွင်ပြောင်း, နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု log, F(4, 3,674) = 29.44, p <.0001, သို့သော်ဤ PPS ကြောင့်ထိခိုက်မခံခဲ့ရ; အုပ်စု F(1, 0.28) = 0.18, p = .83; လိင်, F(1, 7.17) = 0.67, p = .44; သို့မဟုတ်အုပ်စု, လိင်အပြန်အလှန်× F(1, 9.9) = 1.01, p = .34) ။
ပုံ 3a (စမ်းသပ်အစပျိုးခဲ့ပြီးနောက်) ခရိုနီတင်ပြခဲ့ကြသည်တစ်ချိန်ကတုံ့ပြန်မှုအောင်းနေချိန်ဖော်ပြသည်။ နှောင့်နှေးလုပ်ကွက်တိုးတက်အဖြစ်အတိအကျပုံစံအုပ်စုများနှင့်၎င်းတို့စပ်ကြားကွဲပြားပေမယ့်တုန့်ပြန်အောင်းနေချိန်, ရှိသမျှတိရစ္ဆာန်များအဘို့တိုးတက်သဖြင့်, အသွင်ပြောင်း, နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု log, F(4, 1,892) = 88.33, p <.0001 PPS အမျိုးသမီးများသည် Delay Blocks 20 and 40 ရှိ PPS အထီးများထက်တုန့်ပြန်မှုနှေးကွေးပြီးနောက်ဆုံးနှောင့်နှေးမှုပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှအမျိုးသမီးများနှင့်အထီးများအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သည် (၆၀); သစ်တောအသွင်ပြောင်းလဲမှု၊ အုပ်စု××နှောင့်နှေးမှု×လိင်၊ F(4, 1,892) = 2.44, p = .045 ။ ယေဘုယျအားအမျိုးသမီးအမျိုးသားများထက်ပိုရှည်တုံ့ပြန်မှု latency ရ၏ လိင်, F (1, 41.69) = 4.59, p = .04 ။
(က) တုံ့ပြန်မှုအောင်းနေချိန်နှင့် (ခ) အချိန်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ရွေးချယ်မှုအဆင့် (Con) စဉ်အတွင်း nosepoking သုံးစွဲခြင်းနှင့် prepubertally (PPS) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်းဒေတာတင်ဆက်ထားပါသည်။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင်တဦးတည်းစံအမှားကိုယ်စားပြုသည်။
အမျိုးသမီးနှောင့်နှေး Block ကို 60 အတွက်ယောက်ျားထက်ဆုလာဘ်စုဆောင်းဖို့တစ်ကြာကြာအောင်းနေချိန်ခဲ့များနှင့်အမျိုးသမီးနှောင့်နှေး Block ကို 60 ထက်နှောင့်နှေး Block ကို0တစ်ဦးမဟုတ်တော့စုဆောင်းခြင်းအောင်းနေချိန်ခဲ့; ပါဝါအသွင်ပြောင်း, နှောင့်နှေး Block ကို, လိင်× F(4, 3,194) = 242, p = .046 ။
ကိန်းဂဏန်းများ 3b အချိန်တိရစ္ဆာန်များ၏ပမာဏကိုရွေးချယ်မှုအဆင့် (လီဗာတင်ဆက်မှု) စဉ်အတွင်း nosepoking သုံးစွဲပြသထားတယ်။ PPS အမျိုးသမီးရှည်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးသမီးနှင့်နှောင့်နှေးလုပ်ကွက် 40 နှင့် 60 စဉ်အတွင်းအစားအစာဗန်းထဲသို့ nosepoking အားလုံးယောက်ျားထက်သိသိသာသာကုန်ဆုံး; ပါဝါအသွင်ပြောင်း, Group ကနှောင့်နှေး Block ကိုလိင်×× F(4, 1,876) = 2.57, p = .04 ။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များနှောင့်နှေးလုပ်ကွက်တိုးတက်အဖြစ် nosepoking သုံးစွဲအချိန်တိုးတက်သဖြင့်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှောင့်နှေး, F(4, 1,892) = 16.37, p <.0001 PPS ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ အုပ်စု F(1, 8.26) = 0.19, p = .67; လိင်, F(1, 41.33) = 3.84, p = .06; သို့မဟုတ်အုပ်စု, လိင်အပြန်အလှန်× F (1, 44.81) = 2.11, p = .15 ။
နှောင့်နှေးလုပ်ကွက်0မှ 40 ထံမှတိုးလာပေမယ့်နှောင့်နှေးလုပ်ကွက် 40 နှင့် 60 အကြားခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့သကဲ့သို့နှောင့်နှေးအဆင့်စဉ်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များ nosepoking လျော့နည်းအချိန်ကုန်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှောင့်နှေး, F(3, 2,859) = 58.29, p <.0001 အုပ်စုတစ်စု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ F(1,8.03) = 0.003, p = .96; လိင်, F(1, 45.73) = 3.04, p = .09; သို့မဟုတ်အုပ်စု, လိင်အပြန်အလှန်× F(1, 46.69) = 0.03, p = .87, အချိန်ပေါ်နှောင့်နှေးအဆင့်စဉ်အတွင်း nosepoking နေခဲ့ရသည်။
အထီးနှောင့်နှေးလုပ်ကွက် 40, 60 နှင့် 20 နှင့် 40 ထက် 60 အတွက် nosepoking လျော့နည်းအချိန်ကုန်သော်လည်းအမျိုးသမီးအပေါင်းတို့, အခြားအလုပ်ကွက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နှောင့်နှေးလုပ်ကွက်0နှင့် 10 အတွက် intertrial ကြားကာလ (ITI) စဉ်အတွင်း nosepoking လျော့နည်းအချိန်ကုန်, အသွင်ပြောင်း log, နှောင့်နှေး Block ကို, လိင်× F(4, 3,676) = 3.4, p = .009 ။ အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်, F(1, 1.16) = 1.12, p = .46, ဒါမှမဟုတ်လေ့လာခြင်း, F(1, 19.88) = 0.34, p အဆိုပါ ITI စဉ်အတွင်း nosepoking သုံးစွဲအချိန်ပမာဏအတွက် = .57 ။ ဆုလာဘ်စုဆောင်းခြင်းစဉ်အတွင်းနှောင့်နှေးလုပ်ကွက်0ထံမှ 20 ဖို့တဲ့အထိတိုးတက်အဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များ nosepoking လျော့နည်းအချိန်ကုန်, ဒါပေမယ့်နှောင့်နှေးလုပ်ကွက် 20, 40 နှင့် 60 အကြားခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိရှိ၏ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှောင့်နှေး, F(4, 3,686) = 86.75, p <.0001 PPS မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၏ အုပ်စု F(1, 47) = 0.02, p = .89; လိင်, F(1, 47.01) = 0.95, p = .34; သို့မဟုတ်အုပ်စု, လိင်အပြန်အလှန်× F(1, 47) = 0.15, p = .7 ။
ပုံ4တိုးမြှင့်ကြီးမားသောဆုလာဘ်ဖို့နှောင့်နှေးအဖြစ်ကြီးမားသောဆုလာဘ်၏ရာခိုင်နှုန်းရွေးချယ်မှုပြသထားတယ်။ နှောင့်နှေးစက္ကန့် 40 တိုးမြှင်, ဒါပေမယ့် 40 နှင့် 60 စက္ကန့်နှောင့်နှေးအကြားမျှခြားနားချက်ပြသခဲ့သည်အဖြစ်အမျိုးသမီးကြီးမားသောဆုလာဘ်လျော့နည်းရှေးခယျြထားသော်လည်းယောက်ျား, တိုးမြှင့်နှောင့်နှေးအဖြစ်ကြီးမားသောဆုလာဘ်လျော့နည်းမရွေး, နှောင့်နှေးပိတ်ပင်တားဆီးမှု×လိင်, F(4, 1,615) = 3.18, p = .004; မြင် ပုံ 4။ PPS မရှိအဓိကသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်; အုပ်စု, F(1, 8.42) = 0.02, p = .88; လိင်, F(1, 42.18) = 3.68, p = .06; သို့မဟုတ်အုပ်စု, လိင်အပြန်အလှန်× F(1, 44.83) = 0.12, p ကြီးမားသောဆုလာဘ်၏ရာခိုင်နှုန်းရွေးချယ်မှုအပေါ် = .73 ။
ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကြီးမားသောဆုလာဘ်တိုး (Con) အားနှောင့်နှေးအဖြစ်ကြီးမားသောဆုလာဘ်၏ရွေးချယ်မှုနှင့် prepubertally (PPS) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်းဒေတာတင်ဆက်ထားပါသည်။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင်တဦးတည်းစံအမှားကိုယ်စားပြုသည်။
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် PND 21-56
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (Box ကို-ကော့အသွင်ပြောင်း) PPS အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထိုအပတ်အတွင်းအဖွဲ့များအကြားကွဲပြားဘူး (PND 21); သို့သော် PPS PND 28 အားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လျှော့ချခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မှု, ဤယောက်ျားအတွက်အမျိုးသမီးအတွက် PND 56 နှင့် PND 42 သည်အထိကြာမြင့်; Group မှအပြန်အလှန်×အပတ်×လိင်, F(5, 228.1) = 2.59, p = .03; မြင် ပုံ 5။ အထီး PND 49 ကနေအမျိုးသမီးထက် သာ. လေး ရှိ. , Group မှအပြန်အလှန်×အပတ်×လိင်, F(5, 228.1) = 259, p = .03; မြင် ပုံ 5.
prepubertally ထိန်းချုပ်လေး (Con) နှင့် (PPS) (က) အမျိုးသမီးနှင့် (ခ) အထီးကြွက်အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်းဒေတာတင်ဆက်ထားပါသည်။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင်တဦးတည်းစံအမှားကိုယ်စားပြုသည်။
PPS ကြုံနေရအထီးထိန်းချုပ်မှုကနေကွဲပြားဘူးသော်လည်း PPS မှထိတွေ့မှု, အမျိုးသမီးအတွက် compulsive-type အမျိုးအစားအပြုအမူ (perseverative nosepoking) တွင်ရလဒ်။ ကြီးမားသောဆုလာဘ်မှနှောင့်နှေးတိုးမြှင့်အဖြစ်အားလုံးအုပ်စုများနှောင့်နှေးလျှော့အလားတူနှုန်းထားများပြအဖြစ် PPS, လိင်ဖြစ်စေများတွင်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူထုတ်လုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သင်ယူတာဝန်သင်တန်းနှင့်အဓိကတာဝန်, PPS ယောက်ျားအတွက်မမွငျတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်း PPS အမျိုးသမီးအတွက်ချို့ယွင်းခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏ PPS တိရိစ္ဆာန်များ PND 28-56 (အမျိုးသမီး) စဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာလျော့နည်းချိန်နှင့် PND 28-42 (အထီး), ယခင်ကဒီ model အစီရင်ခံတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု (Brydges, Hall, Nicolson, Holmes, & Hall, 2012; Brydges, Seckl, et al ။ , 2014; Brydges, Wood က, et al ။ , 2014).
PPS ကြုံနေရအမျိုးသမီး nosepoke လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းသတ်မှတ်ထားရောက်ရှိဖို့မဟုတ်တော့မဆိုအခြားအုပ်စုတစ်စုထက်သိသိသာသာတာ, အလုပ်တစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းချို့ယွင်းသင်ယူခြင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်လိုငွေပြမှု PPS ကြုံနေရယောက်ျားဒါမှမဟုတ်ရှေ့လီဗာလေ့ကျင့်ရေးအဆင့်လေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါဘူး။ nosepoke လေ့ကျင့်ရေးတစ် nosepoke တုံ့ပြန်မှု necessitated သော်လည်းလီဗာသင်တန်း, အကျိုးကိုတောင့်ရရှိရန်တစ်လီဗာကိုနှိပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာတိရစ္ဆာန်လိုအပ် (တုံ့ပြန်မှုအတွက်အလင်း illumination အမျိုးမျိုးနှင့်ဗန်းမှ) နောက်တော်သို့လိုက်: ဒီလှုံ့ဆော်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များပိုမိုရှုပ်ထွေးဖွစျလာတဲ့အခါ PPS အမျိုးသမီးသာအာရုံချို့ယွင်းခဲ့ကြဆိုတာကိုပြသ တစ်ဦးလီဗာစာနယ်ဇင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ PPS အမျိုးသမီးလညျးတဖနျပိုမိုရှုပ်ထွေးအသင်းအဖွဲ့များသင်ယူခြင်းအတွက်ချို့ယွင်းအကြံပြုခြင်း, အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် (သေးငယ်တဲ့ vs. ကြီးမားတဲ့) ဆုလာဘ်ရွေးချယ်ရေးသူတို့ရဲ့အချိုးအစားတည်ငြိမ်မှကြာကြာမဆိုအခြားအုပ်စုတစ်စုထက်ကိုယူ။ တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်အခြေခံ neuroanatomical အလွှာဟာကောင်းစွာစရိုက်လက္ခဏာတွေမဟုတ်ပေမယ့်အစာစားချင်စိတ်အော်ပရေတာအေးစက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ရိုးရှင်းသောဖြန်ဖြေအာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များ (မျိုးရိုးဗီဇ dissociable များမှာMalkki et al ။ , 2010) ။ သို့သော် striatum ယေဘုယျအားဖြင့်အော်ပရေတာအေးစက်အခြေခံကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (ရှိLiljeholm & O'Doherty, 2012; Yin, Ostlund, Knowlton, & Balleine, 2005) ။ ယခင်လေ့လာမှုများ PPS Two-လမ်းလွန်းရှောင်ရှားခြင်း, ကိုလည်း striatum ပေါ်မူတည်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန် (မှာရှိတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာလေ့လာသင်ယူချို့ယွင်းပြခဲ့ကြTsoory & Richter-Levin, 2006; Wietzikoski et al ။ , 2012) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုနဲ့ပေါင်းပြီး, ဒီ PPS မှထိတွေ့မှုချို့ယွင်းသင်ယူမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, striatal function ကိုအယှက်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်နောက်ထပ်ဒီအယူအဆစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်လိုအပ်သည်။ စွဲလမ်းမမှန်မှဆီလျော်၏, ထို dorsal striatum ကြောင့် (သင်ယူခြင်းလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှ, အပြုအမူရှာကြံ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးEveritt & Robbins, 2013) ။ ကျနော်တို့ယခင်ကယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်နှစ်ဦးစလုံး PPS display ကိုမြှင့်တင်ရန်စိုးရိမ်စိတ်-type အမျိုးအစားအပြုအမူကြုံနေရကြောင်းတွေ့ပြီ (Brydges et al ။ , 2012); သို့သော်ကျနော်တို့တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်အလေးပေးအမျိုးသမီးများ၌တွေ့မြင်သင်ယူမှုချို့ယွင်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြဘူး: PPS အမျိုးသမီး, ကနဦးလေ့ကျင့်ရေးတာဝန်အဖြစ်အခြားအုပ်စုများ (ရိုးရှင်းသောလီဗာစာနယ်ဇင်းအကျိုးကိုဗန်းကနေအစားအစာဆုလာဘ်ရရှိရန်) သင်ယူနိုင်ခဲ့ကြတယ် နှင့်ဤချို့ယွင်းယောက်ျားအတွက်မမွငျခဲ့သညျ။ တိရစ္ဆာန်များသူတို့သင်ယူမှုအဆင့်အတွက်လိုအပ်သောစံချိန်, စံညွှန်းရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း, ဒါသင်ယူမှုအတွက်မဆိုကနဦးနှောင့်နှေးတာဝန်များ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်စွမ်းဆောင်ရည် impact မပြုသင့်တဲ့အခါမှသာအဓိကတာဝန်အပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။
PPS ထိတွေ့အမျိုးသမီးအတွက် compulsive-type အမျိုးအစားအပြုအမူအတွက်ရလဒ်: သူတို့ကခရိုနီဖို့နည်းပါးလာတုံ့ပြန်မှုလုပ်များနှင့်အစားအနှောင့်နှေးလုပ်ကွက် 40 နှင့် 60 စဉ်အတွင်းအစားအစာဗန်းထဲသို့ nosepoking အချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာ PPS အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြီးများဆုလာဘ်တိုးဖို့နှောင့်နှေးအဖြစ် (ထိုအစားအစာကိုဗန်းထဲသို့ nosepoking အစားတစ်ဦးလီဗာကိုရွေးချယ်ခြင်း) မရှိတော့အခြေအနေကအဘို့သင့်လျော်သောသောအပြုအမူနှင့်အတူ perseverate မှပေါ်လာပါသည်။ ဇွဲကဒီသက်ရောက်မှုကိုသာနှောင့်နှေးလုပ်ကွက် 40 နှင့် 60 (တှငျတှေ့မွငျအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြရသော, မှတ်ဉာဏ်တိုးအလုပ်လုပ်အပေါ်တောင်းဆိုမှုများအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖို့လေ့Stedron, Sahni, & Munakata, 2005) ။ (ဇွဲအပါအဝင်) compulsive အပြုအမူတွေနဲ့ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားမမှန်အပါအဝင်စိတ်ရောဂါအခြေအနေအတော်များများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်Alvarez-Moya et al ။ , 2009; Andersen က & Teicher, 2009; က de Ruiter et al ။ , 2009; Lovallo, 2013) ။ compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတွေကိုအကြောင်းမရှိသို့မဟုတ်ဤရောဂါ၏အကျိုးဆက်များမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ဆွေးနွေးငြင်းခုံတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု catechol-O-methyltransferase genotype ကကမကထပြုခဲ့ (ကကျန်းမာသောလူဦးရေအတွက် Wisconsin ပြည်နယ်ကတ် Sorting စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကလေးဘဝအခကျအခဲမြားနှငျ့ perseverative အမှားများကိုအရေအတွက်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့; Goldberg et al ။ , 2013) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော, ဒီကလေးဘဝဒုက္ခအသက်တာ၌အကြာတွင် compulsive အပြုအမူတိုးမြှင့်မှတဆင့်စွဲလမ်းမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုမသော်လည်းဒါဟာ (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် perseverative အပြုအမူအတွက် (PND9မှာ) မိခင်ခွဲခြာစိတ်ဖိစီးမှုရလဒ်များကိုကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်Fabricius, Wörtwein, & Pakkenberg, 2008; Wilson က, Schade, & တယ်ရီ, 2012), အချိန်ကိုက်နှင့်ဒုက္ခ၏သဘောသဘာဝလူကြီးရလဒ်များအဆုံးအဖြတ်များအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု။
နှောင့်နှေးလုပ်ကွက်တိုးတက်အဖြစ်အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များဆုလာဘ်ရရှိခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဖွယ်ရှိတိုးပွားလာမွတ်မပြေနိုင်သောထင်ဟပ်သောလျော့နည်းအစပျိုးခြင်းနှင့်နည်းပါးလာစမ်းသပ်မှုတွေကိုပိုမိုနှေးကွေးစွာတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်အစပျိုးစမ်းသပ်မှုတွေ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်အုပ်စုများနှင့်၎င်းတို့စပ်ကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုနှောင့်နှေးလုပ်ကွက်တိုးတက်အဖြစ်အဖွဲ့များအားလုံးတာဝန်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အညီအမျှလှုံ့ဆော်ခဲ့အကြံပြုခြင်း, ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့များအတွက်အထူးရွေးချယ်မှု (မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများနှောင့်နှေးမတူညီများမှာရသောထုံးစံနှောင့်နှေးလျှော့အပြုအမူပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုတွေ့ကြပြီအထူးသဖြင့်အဖြစ်, ဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်နှောင့်နှေး reverse နှင့်တုံ့ပြန်နှင့်ဇွဲ၏တူညီသောပုံစံများလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ် အားဖြည်; Maguire, Henson, & ပြင်သစ်၊ ၂၀၁၄; Tanno, Maguire, Henson, & ပြင်သစ်၊ ၂၀၁၄).
ကျနော်တို့တာဝန်ဝတဲ့နှောင့်နှေးအတွက်တိုင်းတာအဖြစ်, PPS ရွေးချယ်မှု Impulse တိုးပွါးကြောင်းအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားများကိုရှာပါ။ ဆနျ့ကငျြ, ကြွက်များတွင် PND 2-21 စဉ်အတွင်းမိခင်ခွဲခြာစိတ်ဖိစီးမှု (လျော့နည်းသွားရွေးချယ်မှု Impulse အတွက်ရလဒ်Lovic, စိတ်အားထက်သန်, ဖလက်ချာ, & Fleming က, 2011), နောက်တဖန်ဒုက္ခထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်နှင့်အမျိုးအစားများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း။ လူသားများတွင်လေ့လာရေးအချို့သောတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူရောထွေးရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ (နှောင့်နှေးလျှော့၏နှုန်းထားများတိုးမြှင့်အခြားသူများကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခထိတွေ့ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှုကိုရှာတွေ့Acheson, Vincent, Sorocco, & Lovallo, 2011; Lovallo et al ။ , 2013) ။ ဒီကွာဟမှုများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်ကလေးဘဝဒုက္ခအတိအကျအချိန်ကိုက် (အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝ vs. ဥပမာ) အကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြောင်း genotype (ဥပမာ D4 dopamine အဲဒီ receptor မျိုးကွဲ) ရှေးခယျြမှု Impulse အဆုံးအဖြတ်အတွက်ကလေးဘဝဒုက္ခနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်အထောက်အထား (လည်းရှိပါတယ်Sweitzer et al ။ , 2013) ။ Impulse သညျလူသားတို့အတွက်မျက်နှာစာဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် PPS မှထိတွေ့မှုနှင့်ကလေးဘဝကိုဒုက္ခဖြစ်တယ်, (စွဲလမ်းမမှန်များ၏ Initiative နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအရာ, တိုးမြှင့်မော်တော် Impulse ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Brydges et al ။ , 2012; Lovic et al ။ , 2011; Steiger et al ။ , 2012) ။ Impulse ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာစာ Construction သည်အတိုင်း, စာပေအတွက်ကှာဟအခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းပြချက်ဥပမာ, မော်တော် Impulse နှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်မှု Impulse တိုင်းတာသောလမ်းဖြစ်၏။ ပျမ်းမျှအားတွင်, တိရိစ္ဆာန်များနှောင့်နှေး Block ကို 80 (ကြီးများသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်ရန်မနှောင့်နှေး) အတွက်အချိန်ကြီးမားသောဆုလာဘ် 0% ကိုရွေးပါ။ ရွေးချယ်ရေး၏ဤအဆင့်ကိုမကြာခဏ (ကြွက်များနှင့်အတူနှောင့်နှေးလျှော့လေ့လာမှုများအတွင်းပထမဆုံးဘလောက်တွင်တွေ့မြင်နေသည်Winstanley, Dalley, Theobald, & Robbins, 2003) ။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကတခြားလီဗာနမူနာကောကျခံရဖို့များပါတယ်အဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များအချိန်ဒီလီဗာ 100% ကို select မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
PPS ထိတွေ့အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ပြီးနောက်ရှိပါတယ်သောအယူအဆ supporting, အမျိုးသမီးသော်လည်းမအထီးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တုံ့ပြန် perseverative ခဲ့သည်။ ဤသည်နောက်ထပ် (အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်၏ preclinical မော်ဒယ်များအတွက်သီးခြားစီယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြCahill, 2006; Simpson, ရိုင်ယန်, Curley, Mulcaire, & ကယ်လီ, 2012).
အထီးပိုမြန်အမျိုးသမီးထက်ကြီးမားသောဆုလာဘ်အဘို့အဦးညှစ်သောတည်ငြိမ်နံပါတ်များကိုရယူသော်လည်းထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသမီး, လီဗာလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းပိုမိုမြန်ဆန်ထိန်းချုပ်မှုအထီးထက်သိလိုက်ရတယ်။ ယခင်လေ့လာမှုများတစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ခါတစ်ရံအထီး, သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အမျိုးမျိုးတာဝန်များကိုအတွက်အားသာချက်များနှင့်နောက်ခံယန္တရားများလိင်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း, neurogenesis-related လုပ်ငန်းစဉ်များ, neurotrophic အချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားနေကြသည်အမျိုးသမီး, (ဥပမာ, ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်တွေ့ပြီ ) နှင့် dopamine နဲ့တွင် nerve growth factor receptors အပါအဝင်ဦးနှောက်ထဲမှာ receptors အမျိုးမျိုး၏သိပ်သည်းဆအတွက်ကွဲပြားမှု, (Simpson & ကယ်လီ, 2012; Simpson et al ။ , 2012) ။ ထိုကွဲပြားမှုပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတည်ရှိဘာဖြစ်လို့သို့သော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
အကျဉ်းချုပ်, variable ကို PPS protocol ကိုထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ဇွဲနှင့်ချို့ယွင်းသင်ယူမှုအတွက်ရလဒ်။ ဤသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခအမျိုးသမီးအတွက် compulsive-type အမျိုးအစားအပြုအမူတိုးမြှင့်မှတဆင့်စွဲလမ်းမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအပြည့်အဝကဤပွောငျးလဲအုပ်ချုပ်သည့်ယန္တရားများ elucidate နှင့်ကုထုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်ပစ်မှတ်များကိုလိုအပ်သည်။
Acheson A. , Vincent AS, Sorocco KH, & Lovallo WR (2011) ။ မိသားစုသမိုင်းအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများနှင့်အတူလူကြီးများအတွက်နှောင့်နှေးဆုများပိုမိုလျှော့လျှော့: အိုကလာဟိုးမားမိသားစုကျန်းမာရေးပုံစံများမှလေ့လာမှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန, 35, 1607-1613 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Alvarez-Moya EM, Jimenez-Murcia အက်စ်, Moragas L. , et al ဂိုမက်ဇ-Pena အမ်, Aymamí MN, Ochoa C. ။ Fernandez-Aranda အက်ဖ် (2009) ။ အမျိုးသမီးရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် bulimia nervosa လူနာအကြားအလုပ်အမှုဆောင်လည်ပတ်: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ နိုင်ငံတကာ Neuropsychological Society ၏ဂျာနယ်, 15, 302-306 ။ 10.1017 / S1355617709090377 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Andersen က SL, & Teicher MH (2009) ။ အပူတပြင်းမောင်းနှင်နေပြီးဘရိတ်မရှိခြင်း - ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 33, 516-524 ။ 10.1016 / j.neubiorev.2008.09.009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘေးလ် TL, Baram tz, et al ဘရောင်း AS, စတိန်း JM, Insel TR, ဆက်မက်ကာသီဟာ MM ။ Nestler EJ (2010) ။ ငယ်ဘဝ programming နဲ့ neurodevelopmental မမှန်။ ဟားဗတ်, 68, 314-319 ။ 10.1016 / j.biopsych.2010.05.028 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bao A.-M. , & Swaab DF (2010) ။ ဦး နှောက်၊ အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာလိင်ကွဲပြားမှုများ။ အဆိုပါအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်, 16, 550-565 ။ 10.1177 / 1073858410377005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Box ကို GEP, & Cox DR (1964) ။ အသွင်ပြောင်းတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ တော်ဝင်စာရင်းအင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဂျာနယ်: စီးရီးခစာရင်းအင်းနည်းစနစ်, 26, 211-252 ။
Braun T. , Challis JR, Newnham JP, & Sloboda DM (2013) ။ အစောပိုင်းဘဝ glucocorticoid ထိတွေ့မှု: အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး, placental function ကိုနှင့်ရေရှည်ရောဂါအန္တရာယ်။ Endocrine ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 34, 885-916 ။ [PubMed]
Brenhouse HC၊ & Andersen SL (၂၀၁၁) ။ အထီးနှင့်အမြိုးသမီးမြားအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း: နောက်ခံ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများ၏တစ် ဦး က Cross- မျိုးစိတ်နားလည်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 2011, 35-1687 ။ 1703 / j.neubiorev.10.1016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brydges မိုင်, ခန်းမအယ်လ်, Nicolson R. , ကေတီဟုမ်း MC, & ခန်းမဂျေ (2012) ။ လူငယ်စိတ်ဖိစီးမှု၏စိုးရိမ်ပူပန်မှု, သိမှုဘက်လိုက်မှုနှင့်လူကြီးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်သက်ရောက်မှု: တစ် ဦး ကကြွက်မော်ဒယ်။ PLoS ONE, 7, 10.1371 / journal.pone.0048143 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brydges မိုင်, Seckl ဂျေ, Torrance HS, ကေတီဟုမ်း MC, အီဗန် KL, & ခန်းမဂျေ (2014) ။ လူငယ်စိတ်ဖိစီးမှု hippocampal DISC1, GSK3βနှင့် NRG1 စကားရပ်အတွက်ကြာရှည်စွာပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မော်လီကျူးစိတ်ရောဂါကုသမှု, 19, 854-855 ။ 10.1038 / mp.2013.193 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brydges မိုင်, Wood က ER, ကေတီဟုမ်း MC, & ခန်းမဂျေ (2014) ။ Prepubertal စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် hippocampal function ကို: လိင် - တိကျတဲ့သက်ရောက်မှု။ Hippocampus, 24, 684-692 ။ 10.1002 / hipo.22259 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cahill L. (2006) ။ neuroscience အဘို့အဘယ်ကြောင့်လိင်ကိစ္စရပ်များ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 7, 477-484 Reviews ။ 10.1038 / nrn1909 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cardinal RN, & Aitken MRF (2010) ။ ဝီစကီ - client-server မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောမာလ်တီမီဒီယာသုတေသနထိန်းချုပ်မှုစနစ်။ အပြုအမူသုတေသနနည်းလမ်းများ, 42, 1059-1071 ။ 10.3758 / BRM.42.4.1059 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cardinal RN, & Howes NJ (2005) ။ နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အချို့သောဆုလာဘ်များနှင့်ကြွက်များတွင်ကြီးမားသောမသေချာမရေရာသောဆုလာဘ်များအကြားရွေးချယ်မှုအပေါ်အဓိကကျသည်။ BMC အာရုံကြောသိပ္ပံ, 6, 37 10.1186 / 1471-2202-6-37 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dalley JW၊ Everitt BJ နှင့် Robbins TW (2011) ။ Impulse, compulsivity နှင့်အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု။ Neuron, 69, 680-694 ။ 10.1016 / j.neuron.2011.01.020 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
de Ruiter MB, Veltman DJ၊ Goudriaan AE၊ Oosterlaan ဂျေ၊ Sjoerds Z. နှင့် van den Brink W. (2009) ။ တုန့်ပြန်သည်းခံခြင်းနှင့်အထီးပြproblemနာလောင်းကစားသမားများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆုနှင့်အပြစ်ပေးဖို့ ventral prefrontal sensitivity ကို။ Neuropsychopharmacology, 34, 1027-1038 ။ 10.1038 / npp.2008.175 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dick DM၊ Smith G. ၊ Olausson P. ၊ Mitchell SH, Leeman RF, O'Malley SS, & Sher K. (2010) ။ Impulse တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်၎င်း၏ဆက်နွယ်မှုကိုနားလည်ခြင်း။ စွဲဇီဝဗေဒ, 15, 217-226 ။ 10.1111 / j.1369-1600.2009.00190.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Eiland L. , & Romeo RD (2013) ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, 249, 162-171 ။ 10.1016 / j.neuroscience.2012.10.048 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ersche KD, Roiser JP, အာဘော့အက်စ်, Craig KJ, Muller U. , နို့စို့ဂျေ, et al ။ Bullmore ET (2011) ။ လှုံ့ဆော်မှီခိုအတွက်တုန့်ပြန်ဇွဲ striatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့် D ကို (2 / 3) အဲဒီ receptor agonist အားဖြင့် ameliorated နိုင်ပါသည်။ ဟားဗတ်, 70, 754-762 ။ 10.1016 / j.biopsych.2011.06.033 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Everitt BJ, & Robbins TW (2013) အဆိုပါ ventral ကနေ dorsal striatum ရန်: မူးယစ်ဆေးစွဲ၌မိမိတို့အခန်းကဏ္ of ၏အမြင်များ Devolving ။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 37 (9, Pt ။ တစ် ဦး), 1946-1954 ။ 10.1016 / j.neubiorev.2013.02.010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fabricius K. ၊ Wörtwein G. နှင့် Pakkenberg B. (2008) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ mouse ကိုအပြုအမူနှင့် mouse ကို hippocampus အတွက်စုစုပေါင်းအာရုံခံအရေအတွက်ကအပေါ်မိခင်ခွဲခြာ၏သက်ရောက်မှု။ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ & ရာထူးအမည်, 212, 403-416 ။ 10.1007 / s00429-007-0169-6 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Goel N. , & Bale TL (2009) ။ neuropsychiatric မမှန်မော်ဒယ်အတွက်လိင်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏လမ်းဆုံဆနျးစစျ။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ်, 21, 415-420 ။ 10.1111 / j.1365-2826.2009.01843.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gogtay N. , Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L. , Hayashi KM, Greenstein ဃ, Vaituzis AC အ, et al ။ Thompson ကညနေ (2004) ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ အမေရိက, 101 ၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ, 8174-8179 ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 10.1073 / pnas.0402680101 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Goldberg X၊ Fatjó-Vilas အမ်၊ Alemany S. , Nenadic I. , Gastó C. , & Fañanás L. (2013) ။ သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ်မျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကလေးသူငယ်မတော်မတရားပြုမှုနှင့် COMT အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်မှုကိုလေ့လာမှုနှစ်ခုကိုလေ့လာခြင်း။ စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ်, 47, 989-994 ။ 10.1016 / j.jpsychires.2013.02.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Green JG၊ McLaughlin KA၊ Berglund PA၊ Gruber MJ, Sampson NA, Zaslavsky AM, & Kessler RC (2010) ။ အမျိုးသားပြိုကွဲမှုစစ်တမ်းပွားမှု၌ကလေးဘဝအခက်အခဲများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများပွားခြင်း ၁ - ပထမဆုံးစတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုများ DSM-IV ပုံမမှန်။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 67, 113-123 ၏မော်ကွန်း။ 10.1001 / archgenpsychiatry.2009.186 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hosking ဂျေ, & Winstanley, CA (2011) ။ Impulse သည်အစောပိုင်းဘဝအခက်အခဲများနှင့်စွဲလမ်းမှုကြားတွင်ဖျန်ဖြေသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Lovic et al အပေါ်သီအိုရီမှတ်ချက်။ (2011) ။ အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ, 125, 681-686, 2011 10.1037 / a0024612 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kessler RC, McLaughlin Ka, အစိမ်းရောင် JG, Gruber MJ, Sampson NA, Zaslavsky လေး, et al ။ Williams က DR (2010) ။ အဆိုပါ WHO ကကမ္ဘာ့စိတ်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းများအတွက်ကလေးဘဝအခကျအခဲမြားနှငျ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ psychopathology ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 197 ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်, 378-385 ။ 10.1192 / bjp.bp.110.080499 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob GF, & Volkow ND (2010) ။ စွဲ၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology, 35, 217-238 ။ 10.1038 / npp.2009.110 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Leeman RF, & Potenza MN (2012) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး ကအာရုံစူးစိုက်။ Psychopharmacology, 219, 469-490 ။ 10.1007 / s00213-011-2550-7 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Liljeholm အမ် & O'Doherty JP (2012) ။ သင်ယူမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် striatum ၏ပံ့ပိုးမှုများကို - တစ်ခုဆက်စပ်မှုအကောင့်။ သိမှုသိပ္ပံ, 16, 467-475 အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 10.1016 / j.tics.2012.07.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lovallo WR (2013) ။ ငယ်ဘဝဒုက္ခစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ်: ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychophysiology, 90 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 8-16 ။ 10.1016 / j.ijpsycho.2012.10.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lovallo WR, Farag NH, Sorocco KH, Acheson A. , Cohoon AJ, & Vincent AS (2013) ။ အစောပိုင်းဘဝအခက်အခဲများသည်သိပ္ပံနည်းကျနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥက္ကလာဟိုးမားမိသားစုကျန်းမာရေးပုံစံများမှလေ့လာခြင်း။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန, 37, 616-623 ။ 10.1111 / acer.12016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lovic V. , စိတ်အားထက်သန် D. , ဖလက်ချာ PJ, & Fleming က AS (2011) ။ ငယ်ရွယ်သောမိခင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်လူမှုရေးအရအထီးကျန်ခြင်းသည်ထကြွလွယ်သောပြုမူလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးပွားစေသည်၊ အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ, 125, 481-491 ။ 10.1037 / a0024367 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Maguire DR, Henson C. နှင့်ပြင်သစ် CP (၂၀၁၄) ။ ကြွက်များတွင်နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့စျေးအပေါ် amphetamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှောင့်နှေးကွဲပြားခြားနားသောထုံးစံပေါ်မူတည်သည်။ Neuropharmacology, 2014, 87-173 ။ 179 / j.neuropharm.10.1016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Malkki HAI, Donga LAB, de Groot SE, Battaglia FP, Pennartz CMA, Neuro BMPC, နှင့် NeuroBSIK Mouse Phenomics Consortium (၂၀၁၀) ။ ကြွက်များတွင်လိုချင်သော operant အေးစက်: Heritage နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအဆင့်၏ dissociability ။ အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံနယ်နိမိတ်၊ ၄၊ ၁၇၁ ။PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Morton JB, & Munakata Y. (2002) ။ ငုပ်လျှိုးနေသည့်ကိုယ်စားပြုမှုများနှင့်ယှဉ်လျှင်တက်ကြွစွာ - ဇွဲရှိခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology, 40, 255-265 ။ 10.1002 / dev.10033 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Myers JL၊ ကောင်းပြီ AD၊ & Lorch RF (2010) ။ Riegert In, အယ်ဒီတာခုနှစ်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲ - အစီအမံဒီဇိုင်းများအတွက်အသိုက်နှင့် counterbalanced variable တွေကို။ (Ed ။ ), သုတေသနဒီဇိုင်းနှင့်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (စစ။ 397-414) ။ နယူးယောက်, NY: Routledge ။
Odum AL (2011) ။ နှောင့်နှေးဝ: ငါ AK ပေါ့, သင်ကဋပါပဲ။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်, 96, 427-439 ။ 10.1901 / jeab.2011.96-423 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Patchev AV၊ Rodrigues AJ, Sousa N. , Spengler,, & Almeida OFX (2014) ။ အနာဂတ်မှာယခုဖြစ်သည်: ငယ်ဘဝဖြစ်ရပ်များသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည် Acta Physiologica, 210, 46-57 ။ 10.1111 / apha.12140 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pechtel P. , & Pizzagalli DA (2011) ။ သိပ္ပံနှင့်ထိရောက်သောလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများ: လူ့စာပေတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology, 214, 55-70 ။ 10.1007 / s00213-010-2009-2 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပယ်ရီ JL၊ နယ်လ်ဆင် SE နှင့်ကာရိုး ME (၂၀၀၈) ။ IV ကိုကင်းမှမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ကြွက်များနှင့်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကိုကာကိုလာရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အရာမရှိသောရွေးချယ်မှု။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology, 2008, 16-165 ။ 177 / 10.1037-1064 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pfefferbaum အေ, Mathalon DH, Sullivan EV, Rawles JM, Zipursky RB, & Lim KO (1994) ။ ဦး နှောက်နက္ခတ်ဗေဒင်မှနို့စို့အရွယ်မှနှောင်းပိုင်းလူကြီးသို့ပြောင်းလဲမှု၏အရေအတွက်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ အာရုံကြော, 51, 874-887 ၏မော်ကွန်းတိုက်။ 10.1001 / archneur.1994.00540210046012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schuurmans C. , & Kurrasch DM (2013) ။ မိခင်ပြdistနာ၏ Neurodevelopmental အကျိုးဆက်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ်သိသနည်း။ လက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇ, 83, 108-117 ။ 10.1111 / cge.12049 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Simpson ဂျေ, & ကယ်လီ JP (2012) ။ ကြွက်များတွင်အချို့သောအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒ parameters တွေကိုလိင်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်ရှိမရှိတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အမူအကျင့် ဦး နှောက်သုတေသန, 229, 289-300 ။ 10.1016 / j.bbr.2011.12.036 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Simpson ဂျေ, ရိုင်ယန်စီ, Curley အေ, Mulcaire ဂျေ, & ကယ်လီ JP (2012) ။ ဂန္ထဝင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများတွင်အခြေခံနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုများ။ Neuro-Psychopharmacology & ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှု, 37, 227-236 တိုးတက်မှု။ 10.1016 / j.pnpbp.2012.02.004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sinha R. (2008) ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲမှအားနည်းချက်။ သိပ္ပံ, 1141 ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, 105-130 ၏ရာဇဝင်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stedron JM, Sahni SD နှင့် Munakata Y. (2005) ။ အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အသုံးများသောယန္တရားများ - မြင်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်ဇွဲရှိခြင်း။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်, 17, 623-631 ။ 10.1162 / 0898929053467622 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steiger အိပ်ချ်, Gauvin L. , Joober R. , ဣသရေလအမျိုးကိုအမ်, Badawi G. အ, Groleau P. , et al ။ Ouelette AS (2012) ။ BN ရန်နှင့်ဆက်စပ်ရိုသရုပ်မှဆက်ဆံရေး: bulimia nervosa (BN) အတွက် BcII glucocorticoid အဲဒီ receptor polymorphic နှင့်ကလေးဘဝကိုအလွဲသုံးစားမှု interaction ။ စိတ်ရောဂါသုတေသန 46 ၏ဂျာနယ်, 152-158 ။ 10.1016 / j.jpsychires.2011.10.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sweitzer MM, Halder I. , Flory JD, Craig AE, Gianaros PJ, Ferrell RE, & Manuck SB (2013) ။ dopamine D4 receptor တွင် Polymorphic variation သည်ကလေးသူငယ်လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၏နှောင့်နှေးမှုလျှော့ချခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည် - ကွဲပြားခြားနားလွယ်ကူစွာထိခိုက်လွယ်သောအထောက်အထားဖြစ်သည်။ လူမှုရေးသိမှုနှင့်ထိရောက်သောအာရုံကြောသိပ္ပံ, 8, 499-508 ။ 10.1093 / scan / nss020 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tanno T. , Maguire DR, Henson C. , & France CP (၂၀၁၄) ။ ကြွက်များတွင်နှောင့်နှေးလျှော့အပေါ် amphetamine နှင့် methylphenidate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ: နှောင့်နှေးတင်ဆက်မှု၏အမိန့်နှင့်အတူအပြန်အလှန်။ Psychopharmacology, 2014, 231-85 ။ 95 / s10.1007-00213-013-3209 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tsoory အမ်, & Richter-Levin G. အ (2006) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုလေ့လာခြင်းသည်“ လူငယ်” သို့မဟုတ်“ ဆယ်ကျော်သက်” စိတ်ဖိစီးမှုများအပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ Neuropsychopharmacology ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 9, 713-728 ။ 10.1017 / S1461145705006255 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Turecki G. အ, Ernst C. , Jollant အက်ဖ်, Labontéခ, & Mechawar N. (2012) ။ သတ်သေအပြုအမူ၏ neurodevelopmental ဇစ်မြစ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, 35, 14-23 အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 10.1016 / j.tins.2011.11.008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Volkow ND, & Baler RD (2014) ။ စွဲသိပ္ပံ: neurobiological ရှုပ်ထွေးဖော်ထုတ်။ Neuropharmacology, 76, 235-249 ။ 10.1016 / j.neuropharm.2013.05.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wietzikoski EC, Boschen SL, Miyoshi အီး, Bortolanza အမ်, လုပ်ဆောင်စရာဆန်းတို့စ LM, ဖရန့်အမ်, et al ။ da Cunha C. (2012) ။ conditional ရှောင်ရှားခြင်းတုံ့ပြန်မှုအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် dorsolateral striatum အတွက် D1 ကဲ့သို့ dopamine receptors ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology, 219, 159-169 ။ 10.1007 / s00213-011-2384-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wilson က, CA, Schade R. , & တယ်ရီ AV စနစ်ဂျူနီယာ (2012) ။ အမျိုးမျိုးသောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုများသည်ကြွက်များတွင် ၅ ကြိမ်ရွေးချယ်ထားသည့်အမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်၌စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တားဆီးပိတ်ပင်မှုတုန့်ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, 5, 218-126 ။ 137 / j.neuroscience.10.1016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Winstanley, CA, Dalley JW, Theobald DEH, & Robbins TW (2003) ။ Global 5-HT depletion သည်အမ်ဖက်တမင်း၏ကြံ့ခိုင်မှုကိုကြွက်များအနေဖြင့်နှောင့်နှေးစေသောလျှော့ချပေးသည့်စွမ်းရည်ကိုလျော့ကျစေသည်။ Psychopharmacology, 170, 320-331 ။ 10.1007 / s00213-003-1546-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wojcik ဒဗလျူ, Lee ကဒဗလျူ, Colman ဗြဲ, Hardy R. , & Hotopf အမ် (2013) ။ စိတ်ကျရောဂါ၏သန္ဓေသား၏ဇစ်မြစ်? စနစ်ကျသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းစိတ်ကျခြင်းတို့၏ meta-analysis စိတ်ပညာဆေးပညာ, 43, 1-12 ။ 10.1017 / S0033291712000682 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယဉ်ဟင်၊ Ostlund SB၊ Knowlton BJ နှင့် Balleine BW (2005) ။ ဆာပအေးစက်အတွက် dorsomedial striatum ၏အခန်းကဏ္.ကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်, 22, 513-523 ။ 10.1111 / j.1460-9568.2005.04218.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]